“माफ गर दिदि बहिनि यो बर्ष पनि तिहारमा घर आउन पाईन” « Khabar24Nepal
वीरगन्ज महानगरकी ८८ वर्षीया उपप्रमुख संक्रमित
सेनिटाइजर र अक्सोमिटर कालाेबजारी गर्ने एक पक्राउ
तीन वर्षसम्म नगर एम्बुलेन्स नकिन्ने अहिले आफ्नो गाडी दिएर महानता देखाउनु कत्तिको जायज ?
मानविय सेवामा खबर24नेपाल डटकम, सहयाेगका लागि सबैमा आग्रह
खगेन्द्र अवोस्थि पढ्न लाग्ने समय : ५ मिनेट
बेलुका ओभर काम गरेछु क्यारे ! बिहान उठ्दा आँखा रातै भएको चाल पाएँ जब ऐना अघाडी मेरो आफ्नो झुस्स परेको अनुहार देखेँ ।
ओभर ड्युटि गर्दागर्दै हिजो राती पनि जम्मा तिन घन्टा मात्रै सुतेछु क्यारे ।
दार्ही नकाटेको पनि आज अठ्ठाइस दिन पुगिसकेछ । ऐना अघाडी आज अठ्ठाइस दिन पछि आफ्नै अनुहार हेर्दा पनि चिन्नै हम्मे हम्मे पो पर्यो । घरदेश बाट परदेश झरेपछी ज्यान सुकेको पनि आजै ठूलो ऐना अघाडी आफ्नो शरीर देखेपछि चाल पाएँ ।
हातको घडी हेरेँ , छ बजिसकेको थियो । काममा निस्किने समय भैसकेको थियो । हतार हतार पछाडिपट्टि फाटेको जिन्स प्वाइन्ट लगाएर कामतिर निस्किएँ ।
बेला बेला त सोच्छु मेरो जिन्सको प्वाइन्ट र मेरो मन उस्तै उस्तै त हुन् नि ? मन पनि निकै ठाउँमा फाटेको छ, छेद परेको छ अनि यो प्वाइन्ट पनि त यस्तै छ ।
हुन त कपडाको धर्म नै फाट्नु हो, फाट्छ ।
कपडा त निकै चोटि सियो र धागोले सिलाएँ तर मन … तर मन अहँ केही गरि पनि सिलाउन सकिएन ।
अर्काको देश , जति नै मन लगाएर काम गरेपनि जति नै इमानदारी पुर्वक काम गरेपनी, मेसिनझै चौबीसै घन्टा खटेपनि अहँ कसैले थाकिस् होलास् समेत भन्दैनन् ।
काम गर्दागर्दै दिउँसो मोबाईलमा फोनको घन्टी बज्यो । निकालेर हेरेँ, घरबाट बहिनि ले पो फोन गरिछिन् ।
काम गर्ने बेला फोन उठाउनै नमिल्ने । फोन उठाएको चाल पाए सेटले कामबाटै निकालिदिने । घरमा फोन नभएको पनि एक महिना पुग्नै आँटेको थियो । सेटलाइ छलेर बहिनिको फोन उठाएँ ।
मैले यताबाट हलो भन्न नपाउँदै उताबाट बहिनिको सुक्क सुक्क गरेको आवाजले मनलाई क्षदबिक्षद बनाईदियो ।
“यो साल पनि तिहारमा घर नआउने दाइ ?” हिक्हिकाएर रुँदै बहिनी बोलिन् ।
बहिनिको आवाजले बोल्नै सकिन । मनलाई रुवाइदियो । आँसु रोक्न सकिन । आँखा बाट आँसु खसेर भुइँमा झरे ।
“कति निष्ठुरी है दाइ हजुर ? तपाईं लाई त आमा बुबा अनि हाम्रो माया लाग्दैन है दाइ ?”
बहिनी ले फेरि रुँदै भनिन् ।
म बोल्न सक्ने स्थितिमा थिइनँ । बहिनी भन्दा बढी हिक्हिकाएर रुन मन थियो तर अहँ सकिन ।
समयले अनि गरिबिले यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिएछ कि जहाँ न त खुलेर हाँस्न सक्छु न त खुलेर चिच्यार रुन नै !
“सन्चै छौ ? आमा बुबालाइ कस्तो छ नि नानी ?” मनलाई सम्हालेर म बोलेँ ।
“दम बढेको छ बुबालाई । औषधि किन्ने पैसा छैन दाइ .. हजुर को चिन्ता अनि बुबाको चिन्ताले आमा ले खानै खानुभएको छैन.. ”
बहिनिको बोलाइले मेरो मनलाई पोलिरहेको थियो । बोली अड्किन खोज्यो मेरो ।आँखा बाट आँसु मौनतामै खसिरहेका थिए । आँखा का आँसु बायाँ हातको बाहुला ले पुछ्दै भने,
“पैसा छिट्टै पठाइदिउँला.. मेरो चिन्ता नगर्नु म ठिक छु..आमाबुबा को ख्याल गरे नानी !”
“सबैका दाइ आइसके । यो तिहारमा पनि हजुर नआउने दाइ ?” बहिनी फेरि बोलिन् ।
“यो तिहारमा पनि आउन सक्दिन बहिनी । मन नदुखाए बाहिनी ! यता मेरो निधार खाली भएपनि त्यता तिम्रो हात खाली नराखे ! उही पुरानो तस्विरमा टीका लगाइदिए… ”
मैले यत्ती भन्न नपाउँदै बहिनी झन् रुन थालिन् ।
मैले पछाडिबाट सेट आएको चाल पाएँ ।
हतारहतारमा फोन काटेँ र मोबाइल खल्तीमा राखेँ अनि काम गर्न थालेँ ।
धन्न सेटले फोन गरेको चाल पाएनछ । बहिनी संग तिहारको बेला पनि धित मरुन्जेल फोन गर्न पाइएन ।
मैले राख्छु नभनिकनै फोन राखेर होला बहिनिले निकै चोटि फोन गरिन् तर सेट संगै भएकोले फोन उठाउन सकिन ।
तिहारको बेला पनि नभनिकनै फोन काट्यो, फोन उठाएन दाइले भन्दै बहिनिले निकै चित्त दुखाइन् होला ।
दिनभर मन बिथोलिरह्यो मेरो, मन दुखिरह्यो ।
बहिनी को मन न हो, दाइ आएन भन्दै मन निकै दुखाइन् होला मेरो बहिनिले ।
वल्लोपल्लो गाउँका सबै परदेशिएका दाजुभाइहरु घर फर्किए होलान् । परिवार संग खुशी साँटासाँट गरे होलान् । नयाँ नयाँ लाए होलान् ।
आगनमा हरियो गोबरले पोते होलान् ।
वर्षदिनसम्म अँध्यारो वरपरका गाउँमा मैनबत्ती जले होलान् ।
झिलिमिली बत्तिले राती पनि राती जस्तो देखिदैन होला । आगनमा गाउँका भाइबहिनी हरु सुरिलो आवाजमा खुशीले देउसिभैलो खेल्दैछन् होला तर भित्र मेरो बहिनी खुशी खोज्न परदेश हिँडेको दाइलाई सम्झेर आँसु बगाउँदैछिन् होला ।
मेरि आमा घरको बार्दलिमा बसेर बर्षौ देखि घर छोडेर परदेशिएको मलाई सम्झेर आफ्ना चाउरी परेका गाला आँखाको नुनिलो पानीले भिजाउँदैछिन् होला ।
मेरो बुबा सुकेको घाँटीले “ख्याक ख्याक” गर्दै खोक्दै घरमा आफू मर्नु भन्दा पहिले नै छिट्टै परदेशिएको छोरा पुगे हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्दै हुनुहुन्छ होला ।
तर म अहँ फर्किन सकेको छैन छिट्टै । स्वदेश फर्किने मन नभएको कहाँ हो र मेरो । तर मैले परदेश छोडेर घरदेश जानै लाग्दा गरिबिका हातहरुले मेरा खुट्टालाई परदेशतिरै तानिदिन्छ्न् ।
बहिनिले फोन गर्दै सुँक्क सुँक्क रुँदै “दाइ घर कहिले फर्किने” भनेको पनि आज पाँच वर्ष लाग्न थालेछ ।
अनि मैले बहिनि लाई “छिट्टै फर्किन्छु नानी, बाबा आमाको ख्याल गर्नु” भनेको पनि आज पाँच वर्ष लागिसकेछ ।
मैले घरपरिवार छोडी म जन्मेको स्वर्ग छोडी यो मरुभुमिमा आएको पनि पाँच वर्ष भइसकेछ ।
बहिनी मलाई पनि त रहर छैन नि हजुरहरु बिना यो बिरानो ठाउँमा बसेर पचास डिग्रीको घाम सहेर काम गर्न ।
जब मलाई काम गर्दैगर्दा खाडिको पचास डिग्रीको घामले पोल्छ तब देश फर्की दिउँ लाग्छ । अर्काको देशमा दुनियाँ को दास भएर बस्नु भन्दा आफ्नै देशमा बरु लास भएर फर्किउँ लाग्छ तर त्यतिनैबेला आमाको फाटेको चोली सम्झन्छु ।
आमाको खुट्टामा चप्पल समेत लाउन नपाएर फुटेका कुर्कुचा सम्झन्छु । अलिकति पानी पर्दा पनि चुहिने घरको छानो सम्झन्छु । बेलाबेला साहु आएर त्यही ओत लाग्ने घर पनि आफ्नो नाम गर्दिन्छु भनेको सम्झन्छु । प्रत्येक राती गरिबिले हजुरलाइ रुवाएको र आँसु हजुरका चाउरी परेका गालामा झरेका सम्झन्छु । हामिलाइ खाना खुवाएर हजुरले आफूले अलिकति दाल मात्रै खाएर अघाएँ म त भनेको सम्झन्छु ।
जब म यी सबै कुरा सम्झन्छु तब यो खाडिको घामले भन्दा पनि बढी पोल्छ यी कुराहरुले ।
इतिहास र संस्कृतिको उपयोग
एमालेमा देखिएको मनमुटाव र अबको बाटो !
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट थप ११ जनाको मृत्यु
खेलाडीको पर्खाइमा खेल मैदान
Things You Can And Can’t Use Your Vietnam Brides For
यस्तो रहेछ, राजस्व समूहका १४ जना उपसचिब कर्मचारीको समायोजन, भ्रम र यथार्थ